Warbixin: Maleeshiyada Al-Shabaab oo adoonsata dumar si ay ugu galmoodaan - Hablaha Media Network
Warbixin: Maleeshiyada Al-Shabaab oo adoonsata dumar si ay ugu galmoodaan
HMN:- Markii Salma Cali ay billowday baaritaanka halka ay qabteen labo wiil oo la dhalatay sannadkii la soo dhaafay ayaa waxaa u soo baxay wax kale oo ka yaabiyay. Waxay ogaatay in ka sokow ragga u safray Soomaaliya si ay ugu biiraan Shabaabka ay sidoo kalana jiraan haween ay kooxdu qafaalatay si ay uga dhigtaan addoomo ay u galmoodaan.
“Waxaan ogaaday in dadka xaaladeyda oo kale ku sugan ay badan yihiin,” ayay tiri Salma.
Haweenka waxay isugu jiraan kuwa da’ yar, kuwa waaweyn, Masiixi iyo Muslimiin ku nool Mombsa iyo deegaanno kale oo ka tirsan gobolka xeebta.
” Rag ayaa intay ii yimaadaan ii galmoon jiray—Xitaa tiradooda kuuma sheegi karo. Saddexdii sano ee aan halkaa joogay, nin kasta ayaa ila seexan jiray”, ayay tiri mid ka mid ah haweenka.
” Gabadh kasta oo meesha joogtay labo ilaa saddex rag ah ayaa habeen kasta u galmoon jiray”, ayay tiri haweenay kale.
Qaarkood waxaa lagu khasbay inay ” xaasas” u nqodaan mintidiinta Al Shabaab, waxayna u muuqataa in qaar kale si addoonsi ah xoog loogu heystay si loogu galmoodo.
Iyada oo 16 jir ah ayay lamaane da’ ahi u yimaadeen una soo bandhigeen shaqo ay ka siinayaan magaalada Malindi oo xeebta ku taalla.
“Markii uu miyirku noo soo noqday waxaan aragnay anaga oo joogna qol ay labo nin ku jiraan,” Ayay tiri Faith.
Indhaha ayay maro madaw nagaga xireen. Qolkaas gudahiisa ayayna nagu kufsadeen.”
Iyadoo aad u baqaysa oo kaligeed ah ayay saddexdii sano ee xigtay cunto u karin jirtay rag Soomaali ah oo “gar waawayn”.
“Ayayday hooyo ayaa ahaan jirtay umuliso dhaqameed, sidaas daraadeed aqoon yar ayaan u lahaa hawsha umulinta,” ayay tiri waxayna intaas ku dartay in “anigoon cid kale i wehelinin ayay fooshu i qabatay aniga ayaana canugga iska dhaliyay”.
Gabadheeda oo iyada oo aan dhar xiranin ku soo kortay kaynta ayaa hadda la qabsan la’ nolosha magaalada.
Waxay kortay iyadoo la qabatintay “in aan u noolaanno sidii xayawaanka kaynta oo kale”, ayay tiri Faith.
“Xerada aan joogay waxaa laga soo diray haween si ay u soo qoraan haween kale oo ay xerada u keenaan,” ayay tiri Sarah. “Waxay rabaan inay helaan haween u dhala jiilka xiga ee dagaalamayaasha.”
“Waxay noo sheegtay inay ku sugan tahay goob aad u xun misana khatar badan leh oo gudaha Soomaaliya ah,” ayay tiri Elizabeth. Khadka ayaa ka go’ay mar dambana warkeeda lama maqlin.
“Dadka dowladda ayay ka cabsoodaan,” ayay tiri Sureya Xersi oo ka tirsan hay’adda ‘ Gabdhaha aan Xudduuda lahayn’ oo fadhigoodu yahay gobolka xeebta kana shaqeeya la dagaalanka xagjireynta dhallinyarada.
” Labaduba, kuwa iskood u aaday iyo kuwa lagu khasbayba, waxaa loola dhaqmaa inay dambiilayaal yihiin.”
FG: Magacyada haweenka sheekadan waa la badalay sababa la xiriira ammaankooda.